गुल्मीमा अविवाहित महिलाले जन्माइन् छोरा, छोरा पाएको खबरले गाउँभरि खुशियाली ! - Hamro Abhiyan
गुल्मीमा अविवाहित महिलाले जन्माइन् छोरा, छोरा पाएको खबरले गाउँभरि खुशियाली !
सोमवार गुल्मीकी एक अविवाहित महिलाले छोरा जन्माएकी छन् । रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्वर ११ सिमचीचौरकी अन्दाजी २५ बर्षीया रुमकली नेपाली –(नाम परिवर्तन) ले जिल्ला अस्पताल तम्घासमा छोरा जन्माएकी हुन्।सोम बार विहान उनी सिमिचौरको सडकमा सुत्केरी ब्याथा लागेर लडेको थाह पाउन साथ त्यहाँका वडाध्यक्ष खुमबहादुर रानाले तत्काल गाडी मगाई जिल्ला अस्पताल ल्याएका थिए । रानाले अस्पालका स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्ररी हेरचाह गराउन र खर्चका लागि कुनै चिन्ता नगर्नु भनेर सुझाएका थिए ।
अत्यान्तैै विपन्न परिवारकी उनी मानसिक सन्तुलन समेत ठिक नभएको वडाअध्यक्ष रानाले बताएका छन् । साथै उनको परिवारको अवस्था एकदमै नाजुक रहेकोले उनको सम्पूर्ण उपचार खर्च आफुले ब्यहोर्ने वडाध्यक्ष रानाले बताए छन् । उनले भने–‘ आमा छोरा दुबैलाई बचाउन सकियो, उनले जन्माएको छोरा देखेर खुशी लागेको छ ।’वडा सदस्य हुमकली रानाले भने फकाएर सोध्दा पनि उनले कुनै पुरुषको पनि नाम नलिएको बताएका छिन् । यद्यपि उनले छोरा पाएको खबरले गाउँबासी नै खुसी भएको वडा सदस्य राना बताउछिन् ।
सुत्केरी भएकी महिला मानसिक सन्तुलन ठिक नभए पछि उनको विवाह नभई बृद्ध बृद्धा आमा बाबुसंग बस्ने गरेकी थिईन् ।उनको र शिशुको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको प्रशुती गराइएको डाक्टर सरोज पोखरेलले बताए । प्रहरी प्रशासनको सहयोगले बच्चाको वास्तविक बाबुको खोजी गरिने वडाध्यक्ष रानाले बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुस – पाईंको जन्म कुण्डली तपाईंको अतित, वर्तमान र भविष्यको ऐना हो । तपाईंले भविष्यमा कस्तो समस्याको सामना गर्नुहुन्छ, कुन समय कुन घटनाले तपाईंको जीवनलाई कस्तो मोडमा पुर्‍याईदिन्छ । यो सब कुण्डलीको मूल्यांकनबाट थाहा पाउन सकिन्छ । कुण्डली जाँच्नु एउटा गहन कार्य हो, यसको कारण हो ज्योतिष अपवाद, जसको कारणले एकै किसिमको कुण्डली भएको मानिसहरुको जीवन अलग-अलग हुन जान्छ ।
ज्योतिषशास्त्र एउटा जटिल विद्या हो, शायद त्यसैले धेरैजसो ज्योतिषाचार्य खोक्रो रूपमा जाँचेर भविष्यवाणी गर्दिने गर्छन् । जुन धेरैजसो अवस्थामा हानिकारक सावित हुन्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि ज्योतिषमा धेरथोर कुराहरु थाहा हुनुपर्छ । घटना र दुर्घटना जुनसुकै अवस्थामा पनि कुण्डलीद्वारा कुन समयमा हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । तपाईंको कुण्डलीको आधारमा जीवनमा हुने दुर्घटनाको योगलाई कसरी जान्न र बुझ्न सकिन्छ ? जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा छैटौं र आठौं भावका स्वामी अशुभ ग्रहको साथमा बसेको हुन्छ यस्तो व्यक्तिको जीवनमा दुर्घटना घट्ने सम्भावना अत्यधिक हुनसक्छ ।
ज्योतिषशास्त्रको अनुसार दुर्घटनाको सिँधा सम्बन्ध लग्न र लग्नेशसँग हुन्छ । लग्नको अर्थ शरीर हुन्छ, त्यसैले यस्तो भन्ने गरिन्छ कि लग्नमा शुभ ग्रह हुनु उत्तम हुन्छ । मारक वा अशुभ ग्रहले जब लग्न र लग्नेशमा गोचर गर्छन् त्यो व्यक्ति दुर्घटनाको चपेटामा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । यदि त्यहरु मारक ग्रहको अन्तरदशा चलिरहेको छ भने जातकमा दुःख र कष्ट पुग्ने योग बन्छ ।
आउनुहोस्, जानौँ दुर्घटनाको लागि कुन ग्रह जिम्मेवार हुन्छन् ?
मंगल र शनि ग्रह मिलेर दुर्घटनाको योग बनाउँछन् । त्यही लग्न अथवा दोस्रो भावमा राहु र मंगल सामेल छन् भने दुर्घटनाको योग बन्छ । लग्नमा शनि र मंगल ग्रह हुनु अशुभ संकेत हो । तेस्रो भावमा मंगल र शनि छ भने पनि घातक साबित हुन्छ । जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु पनि तय भएकै हुन्छ, तर असामयिक मृत्यु र शारीरिक पिडाबाट बच्नको लागि तपाईं केहि उपायहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
आउनुस् जानौँ दुर्घटना र कुनैपनि नराम्रो कुराबाट बच्नको लागि प्रभावकारी ज्योतिष उपाय :
हनुमान जी को आराधनाले आउने खतरा टाढा हुन्छन् । हनुमानको मन्दिर गएर माटोको दियोमा चमेलीको तेलको दियो बाल्नुहोस् । हनुमान मन्दिरको पुजारीसँग आफ्नो हातमा रातो डोरो बाध्नु शुभ हुन्छ । तसर्थ चराहरुलाई रातो दाल खुवाउनु पनि शुभ हुन्छ । आफ्नो घरको छतमा रातो झण्डा राख्नुहोस् र एउटा कागतीमा सिन्दुर लगाएर घरको छतबाट फ्याकिदिनुहोस् । नरिवलमा डोरो बाधेर हनुमान जीलाई अर्पित गर्नुस् र हनुमानको मुर्तिमा रातो फुल चढाउनुस् ।